မြေနမူနာ စနစ်တကျ ကောက်ယူနည်း
သီးနှံ စိုက်ပျိုးမြေ တစ်ဧကလျှင် ကျဘမ်းနေရာ (၂၀) ၏ အပေါ်ယံ (၆) လက်မ အနက်မှ ယူထားသော မြေနမူနာ (၂) ပေါင်ခန့် (၅၀ ကျပ်သားခန့်) အလေးချိန် ရှိသည့် ပမာဏသည် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန် လုံလောက်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးသီးနှံအတွက် ထွန်ရေးထယ်ရေး မယူမီ / မြေမပြုပြင်မီ (သို့မဟုတ်) သီးနှံ ရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် မြေနမူနာယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဧကလျှင် ကျဘမ်းနေရာ (၂၀) အား အကွက်အတွင်း ဇစ်ဇတ်ပုံ (ပုံ - ၁.က) သွား၍သော်လည်း ကောင်း၊ ထောင့်ဖြတ်ပုံ (ပုံ - ၁.ခ) သွား၍ သော်လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။
စိုက်ခင်းမှ မြေနမူနာယူရာတွင် မြေနမူနာယူသည့် ကိရိယာ အမျိုးမျိုးဖြစ်သော အော်ဂါ၊ ပြွန်၊ ဂေါ်ပြား (ပုံ - ၂.က) စသည်တို့ဖြင့် ယူနိုင်ပါသည်။
စိုက်ခင်းများတွင် အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့် ပေါက်ပြားဖြင့်လည်း မြေနမူနာ ယူနိုင်ပါသည်။ ပေါက်ပြားကိုအသုံးပြု၍ မြေနမူနာယူမည်ဆိုပါက-
၁) မိမိယူမည့် နေရာမှ ပေါင်းမြက်များနှင့် အမှိုက်များအား ရှင်းလင်းပြီး (၆) လက်မ အနက်ထိ (၁)လက်မ အထူရရန် ပေါက်ပြားဖြင့် ဗွီပုံစံ (V Shape) ပေါက်ချပါ။
၂) ပေါက်ပြားပေါ်ရှိ မြေချပ်မှ ဘေးအစွန်း (၂) လက်မစီခန့်ကို ပယ်ပြီး အတွင်းသား (ပုံ - ၂.ခ) ကို ယူပါ။
၃) တစ်ဧက အကွက်အား ကိုယ်စားပြုကျဘမ်း (Random and Representative) နေရာ အနည်းဆုံး (၂၀) မှ ကောက်ယူထားသည့် မြေများအား သမအောင် မွှေပါ။
၄) မြေနမူနာများကို ညီမျှစွာ (၄) စိတ်ခွဲ၍ ထောင့်ဖြတ် (၂) စိတ်ကို ဖယ်ကာ ကျန်ထောင့်ဖြတ် ၂ စိတ် (ပုံ- ၂. ဂ) ကို ယူပါ။ ထိုသို့ လေးစိတ်ခွဲခြင်းကို မြေနမူနာ ရယူရမည့် ပမာဏ လုံလောက်သည်အထိ ခွဲယူပါ။
✅ သမန်းခင်း၏ မြေနမူနာယူခြင်း
စပါးစိုက်ပျိုးရန် သမန်းပြုလုပ်ထားသော နေရာမှ မြေနမူနာယူမည် ဆိုပါက အရှည် (၁) ပေခန့် ရှိသော ပီဗွီစီပိုက် တွင် (၆)လက်မ နေရာ၌ အပေါက်ငယ်များဖောက်ပြီး ထိုပိုက်ကို အသုံးပြုပြီး (ပုံ - ၃. က) မြေနမူနာအစိုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
မြေနမူနာထည့်မည့် အိတ်သည် တစ်ခါမျှ မသုံးရသေးသော ပလတ်စတစ်အိတ်အသစ် ဖြစ်ရပါမည်။ ဆေးစိမ်သည့် မျိုးစေ့များ ထည့်ထားသည့် အိတ်များ၊ မသန့်ရှင်းသော ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များ၊ သတင်းစာအဟောင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စက္ကူအိတ်များဖြင့် မထည့်သင့်ပါ။
✅ မြေနမူနာ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် ပေးပို့ခြင်း
မြေနမူနာထုတ်တွင် ကောက်ယူခဲ့သည့် နေရာ၊ မြေ၏အနက်နှင့် ကောက်ယူခဲ့သည့် နေ့စွဲတို့ကို သေချာစွာ ဖော်ပြရပါမည်။ ဓာတ်ခွဲလိုခြင်း အကြောင်းအရင်း (ပုံ - ၃.ခ) ကို ရှင်းလင်းစွာရေးသားဖော်ပြ၍ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မြေဆီလွှာသုတေသနဌာနစုသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
✅ မြေဆီလွှာသုတေသနဌာနစု ဓာတ်ခွဲခန်းက တိုင်းတာပေးနိုင်သည့် ဓာတ်ခွဲခြင်းများ
၃။ အပင်စားသုံးနိုင်သော နိုက်ထရိုဂျင်
၄။ အပင်စားသုံးနိုင်သော ဖော့စ်ဖရပ်စ်
၅။ အပင်စားသုံးနိုင်သော ပိုတက်စီယမ်
မူရင်း- မြေဆီလွှာသုတေသနဌာနစု၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည့် မြေနမူနာစနစ်တကျ ကောက်ယူနည်း လမ်းညွှန်စာစောင်
မြန်မာ့ရေ၊ မြေ သဘာဝနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော စပ်မျို...
ကြံသီးနှံ အထွက်ကောင်းစေရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် န...